Lammiileen Oromoo biyya Australia Gootota Oromoo Kabajatan
Date: April 28, 2013Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Melbourne, 27 Ebla 2013) Sabboontoti Oromoo biyya Australia magaalaa Melbourne keessa jiraatan Guyyaa Gootota Oromoo sirna miidhagaa, imimmaanii fi callisaan guutameen kabajatan.
Yaadannoo Guyyaa Gootota oromoof yeroo dungoon qabsiisamu @ Melbourne, 21 Ebla 2013
Sirna yaadannoo dungoo qabsiisuun eegalame kana irratti hirmaattonni bakka taa’anii ka’anii gootota Oromoo bilisummaa Oromoof wareegaman daqiiqaa muraasaaf yaadatanniru.
J Bantii Oliiqaa, Dura Taa’aa konyaa ABO V
Sirna kana haasaan Dura Taa’aan Konyaa ABO Victoria, Jaal Bantii Oliiqaa dubbii dubbatan keessatti guyyaa kana ‘yeroo yaadannu, waan goototi keenya dalaganii darban fakkeenya godhachuun waan nurraa eegamu kennuuf yeroo itti hirbuu keenya haaromsannuu dha,” jedhan.
“Gootota keenya wareegaman yeroo yaadannu gadda guddaatu nutti dhagayama,” kan jedhan Jaal Bantiin, “haata’uutii wareegaa gootota keenyaan injifannooleen argaman akka jabaannee Kaayyoo isaan wareegaman milkeessuu irratti hojjannu nu taasisa,” jedhanii jiru.
J Gaashuu Lammeessaa
Jaal Gaashuu Lammeessaa, MGS ABO fi Gaafatamaan Birkii Beeksisii fi Odeessii Alaa, gama isaaniitiin sirna baniinsa guyyaa yaadannoo kana irratti dubbii dubbataniin Guyyaan Gootota Oromoo “guyyaa seenaa fi eenyummaa Oromoodeebisanii jiraachisuuf wareegota baafaman mara itti yaadatamuu dha,” jedhan.
“Wareega gootota Oromootiin seenaa fi eenyummaan Oromoo badii jalaa bararee sadarkaa olaanaatti deebi’aa jira,” kan jedhan Jaal Gaashuun, “ goototi Oromoo guyyaa kana wareegaman kanneen seenaa fi eenyummaa Oromoo badii jalaa oolchuuf wareega ulfaataa baasan waan ta’aniif bara baraan yaadatamaa jiraatu,” jedhan.
Waraanni Bilisummaa Oromoo akkuma kaleessatti ergama isaa bahuu jabeessee akka jiru kan ibsan Jaal Gaashuun, “dhalooti haaraas biyya keessatti bifa Qeerroon walijaaranii qabsoo Bilisummaaf tinnisa jabaa gochaa jiran,” jedhanii jiru.
Sabboontoti guyyaa gootota Oromoo kana irratti argamanis walaloo gootota Oromoo faarsanii fi leellisan dhiyeessuun ayyaanichaaf miidhagina kennanii jiru. Dhalooti Qubees walaloo gootata Oromoo roga hundatti otuu falmaa eenyummaa gaggeessanii wareegaman faarsus dhiyaatee jira.
Sirna kana irratti seenaa Oromoo balleessuuf shiroota olaanaa hojjatamaa turan jalaa bahuun kan danda’ame jabinaa fi kutannoo ummati keenya qabuun ta’uu illee ibsamee jira.
Qophiin caalbaasii fi madda galii illee meeshaalee gurgurtaaf dhiyeessan irraa galii maallaqaa kan qabsoo bilisummaa Oromoof oolu maddisiisanii jiru.
Ijoolleen, jaarsoliin, dargaggooti fi shamarran Oromoo alaabaa Oromoon faayamanii sirna kana irratti hirmaatanis, dhalooti haaraan seenaa guyyaa kanaa sirnaan akka hubatutti barreessanii kaayuun barbaachisaa akka ta’e ibsanii jiran.
Oromummaan faayamanii kanneen Guyyaa Yaadannoo kabajatan keessaa
Guyyaan gootota Oromoo kun wareega ulfaataa ilmaan oromoo dirree falmaa keessatti baasaa jiran yaadachuuf bara 1980 irraa
eegalee dirree falmaa fi maadhee biyyaa keessatti kabajamaa dhufe. Yeroo ammaa kanatti immoo guyyaan kun dirree falmaa fi biyya keessaa bira darbee addunya mara, biyyoota sabboontoti Oromoo, keessa qubatanii jiran keessatti
sadarkaa olaanaan kabajamaa jira.
Guyyaan kun Oromoo akkamii akka taane qofaa otuu hin taane, saba akkamii akka taanu illee kan nuuf akeekuu guyyaa seena qabeessa ta’aa akka jiru hayyooti hedduun ibsaa jiran dha.
Previous Previous post: Guyyaan gootota Oromoo sirna hoo’aafi miidhagaan kabajamaa jira.
Next Next post: “NO MAN IS AN ISLAND” IN OROMIA